कतै यी १० गलत बानीले तपाईंको मस्तिस्क कम्जोर बनाइरहेको त छैन ? – जीवन शैली
Home /स्वास्थ्य/कतै यी १० गलत बानीले तपाईंको मस्तिस्क कम्जोर बनाइरहेको त छैन ?
धूमपान स्वास्थको लागि हानिकारक छ । यसले जीवनलाई छोट्याउने मात्र होइन दिमागलाई पनि कमजोर बनाउँछ । म्याकगिल युनिभर्सिटीले गरेको एक अध्ययनका अनुसार धुमपानले मस्तिष्कको संवेदनशील भाग कर्टेक्सलाई सीधा असर गर्छ जसको कारण स्मरण शक्तिमा कमी आउँछ ।